UYIQHUBA NJANI IFALLOUT 3 KWIWINDOWS 10? - ITHAMBILE
Uyiqhuba njani iFallout 3 kwiWindows 10?
IFallout 3 ngokungathandabuzekiyo ngomnye weyona midlalo mikhulu yokudlala eyakha yenziwa. Yasungulwa ngo-2008, umdlalo uphumelele iimbasa ezininzi kunye namawonga. Olu luhlu lubandakanya amabhaso amaninzi oMdlalo woNyaka wonyaka ka-2008 kwaye amanye ngo-2009, uMdlalo wokudlala indima yoNyaka, i-RPG egqwesileyo, njl. njl ithengisiwe!
Ikwasesinye sezizathu eziphambili zokuba kutheni abadlali kwihlabathi liphela bathande uthotho lomdlalo weBethesda Game Studios emva kwe-apocalyptic Fallout. I-Fallout 3 ilandelwa kukukhululwa kwe-Fallout 4 kunye ne-Fallout 76. Nangona, ngaphezu kweminyaka elishumi emva kokukhululwa kwayo, i-Fallout 3 isakhanga abadlali abaninzi kwaye ilawula njengenye yezona zinto zithandwa kakhulu kwaye zidlalwa imidlalo emhlabeni jikelele.
Umdlalo, nangona kunjalo, waphuhliswa ukuba usebenze kwiikhompyuter ze-clunky zeminyaka elishumi edlulileyo kwaye ngenxa yoko, abasebenzisi abazama ukuqhuba umdlalo kwiiPC ezitsha nezinamandla ngakumbi ezisebenza kweyona ndlela yamva nje nenkulu yeWindows bajongana nemiba ethile. Enye yazo ngumdlalo uqhekeka kanye emva kokuba umdlali ecofa iqhosha elitsha ukuqala umdlalo omtsha. Kodwa kunini apho ukuphazamiseka okuncinci kuye kwamisa abadlali ekudlaleni?
Umanyano olubanzi lwabadlali lufumene iindlela ezininzi zokusebenzisa iFallout 3 Windows 10 ngaphandle kwehiccups. Sinazo zonke iindlela ezidweliswe ngezantsi kwisikhokelo senyathelo nenyathelo ukuze ulandele kwaye ufumane umdlalo!
Ndiyifumana njani iFallout 3 ukuba isebenze kwiPC yam?
Indlela yoku-1: Baleka njengoMlawuli
Indlela yesi-2: Qhuba kwiMowudi ehambelanayo
Indlela yesi-3: Faka iMidlalo yeWindows Live
Indlela yesi-4: Guqula iFayile yeFalloutprefs.ini
Ukuqhuba iFallout 3 kakuhle ngaphakathi Windows 10, abasebenzisi bafuna nje ukuqhuba umdlalo njengomlawuli okanye kwimowudi ehambelanayo. Ezi ndlela aziyi kusebenza kubasebenzisi abathile, endaweni yoko banokuzama ukukhuphela iMidlalo yeWindows Live application okanye ukuguqula iFalloutprefs.ini ifayile yoqwalaselo. Zombini ezi zichazwe ngezantsi.
Kodwa ngaphambi kokuba siqhubele phambili kwiindlela ezithile, qiniseka ukuba unabaqhubi bekhadi lemizobo ehlaziyiweyo efakwe kwikhompyuter yakho njengoko ezi zodwa zinokusombulula intaphane yeengxaki.
Abaqhubi beGPU banokuhlaziywa ngokusebenzisa le ndlela ingezantsi:
1. Ukuya vula Umlawuli wesixhobo , cofa iqhosha leWindows + X (okanye cofa ekunene kwiqhosha lokuqala), kwaye ukhethe Umphathi weSixhobo kwimenyu yomsebenzisi wamandla.
2. Yandisa Bonisa iiadaptha ngokucofa kabini kwileyibhile.
3. Cofa ekunene kwiKhadi lakho leMizobo (NVIDIA GeForce 940MX kulo mfanekiso ungezantsi) kwaye ukhethe Hlaziya uMqhubi.
4. Kwi-pop-up elandelayo, cofa ku Khangela ngokuzenzekelayo isoftware yomqhubi ohlaziyiweyo .
Ikhompyuter yakho iya kukhangela ngokuzenzekelayo kwaye ifake abaqhubi bekhadi lakho lemizobo. Qinisekisa ukuba unonxibelelwano lweWiFi/Intanethi olusempilweni. Kungenjalo, unako ukuhlaziya abaqhubi beGPU ngokusebenzisa usetyenziso lweqabane (Amava eGeForce eNVIDIA kunye neRadeon Software ye-AMD) yekhadi lakho lemizobo.
Siza kuxoxa ngeendlela ezi-4 ezahlukeneyo usebenzisa onokuthi udlale ngokulula iFallout 3 yakho Windows 10 PC, ke ngaphandle kokuchitha ixesha zama ezi ndlela.
Kwiimeko ezininzi, ukuqhuba nje umdlalo njengomlawuli kwaziwa ngokusombulula naziphi na iingxaki ezifunyanwayo. Apha ngezantsi kukho indlela yokusoloko usungula iFallout 3 njengomlawuli.
1. Siqala ngokujonga kwifolda yeFallout 3 kwiinkqubo zethu. Ifolda ifunyenwe ngaphakathi kwesicelo seSteam.
2. Qalisa iWindows IFayile Explorer ngokucofa kabini i icon kwidesktop yakho okanye usebenzisa indlela enqumlayo ye-keyboard yeWindows + E.
3. Yiya kwenye yezi ndlela zimbini zikhankanywe ngezantsi ukuze ufumane iFallout 3 ifolda:
Le PCC:iifayile zeNkqubo (x86)SteamsteamappscommonFallout 3 goty
Le PCC:iifayile zeNkqubo (x86)SteamsteamappscommonFallout 3
4. Kungenjalo, ungavula isicelo (umdlalo) ulawulo ngokunqakraza-ekunene kwi Fallout 3 isicelo icon kwi desktop yakho kwaye ukhethe Vula Indawo ekuyo Ifayile .
5. Fumana iFallout3.exe ifayile kwaye ucofe ekunene kuyo.
6. Khetha Iipropati ukusuka kwimenyu yeenketho ezilandelayo.
7. Tshintshela kwi Ukuhambelana isithuba sefestile yeFallout 3 yeepropathi.
8. Yenza 'Sebenzisa le nkqubo njengomlawuli' ngokukorekisha/ukukhangela ibhokisi esecaleni kwayo.
9. Cofa apha Faka isicelo ilandelwe ngu Kulungile ukugcina utshintsho olwenziwe.
Yiya phambili kwaye uqalise iFallout 3 kwaye ujonge ukuba iyasebenza ngoku.
Ngaphandle kokusebenza njengomlawuli, abasebenzisi baye baxela ngempumelelo ukuba bakwazi ukudlala iFallout 3 emva kokuyiqhuba kwimowudi ehambelanayo Windows 7, inkqubo yokusebenza apho umdlalo wawuyilwe kwaye walungiswa.
1. Ukuqhuba i-Fallout 3 kwimowudi yokuhambelana, kuya kufuneka sibuyele emva kwifolda yomdlalo kwaye siqalise iifestile zepropati. Landela inyathelo 1 ukuya kwisi-4 kwindlela yangaphambili yokwenza oko.
2. Kanye kwi-Compatibility thebhu, yenza 'Sebenzisa le nkqubo ngendlela ehambelanayo' ngokuphawula ibhokisi ngasekhohlo kwayo.
3. Cofa kwi-drop-down menu ngezantsi Yenza le nkqubo kwimo ehambelanayo kwaye ukhethe IWindows XP (iPakethi yeNkonzo 3) .
4. Cofa apha Faka isicelo ilandelwe ngu Kulungile .
5. Kuya kufuneka siwaphinde la manyathelo angasentla kwiifayile ezimbini ezingakumbi, ezizezi, FalloutLauncher kwaye Ukuwa kwe-3 - Abagadi bekiti yokutya .
Ke, qhubeka kwaye wenze ' Yenza le nkqubo kwimo ehambelanayo ' kuzo zombini ezi fayile kwaye ukhethe iWindows XP (iPakethi yeNkonzo 3).
Ekugqibeleni, qalisa iFallout 3 ukujonga ukuba impazamo isonjululwe. Ndiyathemba ukuba uya kukwazi ukuqhuba iFallout 3 Windows 10 ngaphandle kwayo nayiphi na imiba. Kodwa ukuba ukusebenzisa iFallout 3 kwimowudi ehambelanayo yeWindows XP (iPakethi yeNkonzo 3) ayisebenzanga, tshintshela kwimowudi ehambelanayo yeWindows XP (iPakethi yeNkonzo 2), Windows XP (iPakethi yeNkonzo 1) okanye Windows 7 enye emva kwenye de ube wena. baphumelele ekuqhubeni umdlalo.
Ukudlala iFallout 3 kufuna iMidlalo yeWindows Live usetyenziso olungahlohlwanga ngokungagqibekanga Windows 10. Ngethamsanqa, ukuhlohla iMidlalo yeWindows Live (GFWL) kulula kakhulu kwaye kuthatha imizuzu embalwa kuphela.
1. Cofa kwi-URL elandelayo ( Khuphela Imidlalo yeWindows Live ) kwaye ulinde isikhangeli sakho ukuba sigqibe ukukhuphela ifayile yokuhlohla.
2. Cofa kwifayile ekhutshelweyo .exe (gfwlivesetup.exe), landela i-on-screen prompts/instructions, kwaye faka Imidlalo yeWindows Live kwinkqubo yakho.
3. Yakube ifakiwe sungula Imidlalo yeWindows Live ngokunqakraza kabini kwi icon yayo.
4. Isicelo siya kukhuphela ngokuzenzekelayo iifayile ezifunekayo ukuqhuba iFallout 3 kumatshini wakho. Qinisekisa ukuba uqhagamshelo lwakho lwe-intanethi lusebenza kakuhle kungenjalo i-GFWL ayizukwazi ukukhuphela iifayile.
5. Nje ukuba zonke iifayile eziyimfuneko zikhutshelwe yi-GFWL, vala isicelo kwaye uqalise iFallout 3 ukuqinisekisa ukuba impazamo iye yahoywa.
Ukuba oku ngasentla akusebenzanga ngoko unokukrazula i-GFWL ngaphandle koMdlalo. Kufuneka usebenzise i Imidlalo yeWindows Live Disabler ukusuka kwi-Nexus Mods okanye FOSE , isixhobo sokuguqula iFallout Script Extender ukukhubaza i-GFWL.
Ukuba awukwazanga ukuqhuba iFallout 3 usebenzisa ezi ndlela zingasentla, kuya kufuneka uguqule/uhlele ifayile yoqwalaselo ebizwa ngokuba Falloutprefs.ini efunekayo ukuqhuba umdlalo. Ukuguqula ifayile ayingomsebenzi unzima kwaye kufuna ukuba uchwetheze umgca omnye.
Okokuqala, qalisa iWindows File Explorer ngokucinezela iqhosha leWindows elinqumlayo + E. Ngaphantsi kwecandelo lokufikelela ngokukhawuleza, nqakraza Amaxwebhu .
Ngaphakathi kwifolda yaMaxwebhu, vula Imidlalo yam (okanye Imidlalo) isiqulathi seefayili.
Vula i Ukuwa 3 isicelo ngoku.
Khangela i falloutprefs.ini ifayile, cofa ekunene kuyo, kwaye ukhethe Vula Nge .
Kuluhlu olulandelayo lwezicelo, khetha Incwadi yokubhalela .
Yiya kwifayile yeNotepad kwaye ufumane umgca bUseThreadedAI=0
Unokukhangela ngokuthe ngqo lo mgca ungasentla usebenzisa i-Ctrl + F.
Guqula i-bUseThreadedAI=0 ukuya bUseThreadedAI=1
Ukuba awukwazi ukufumana i-bUseThreadedAI=0 umgca ngaphakathi kwefayile, hambisa ikhesa yakho ekupheleni koxwebhu kwaye chwetheza bUseThreadedAI=1 ngononophelo.
Yongeza iNumHWTreads=2 kumgca omtsha.
Ekugqibeleni, cinezela Ctrl + S okanye cofa kwiFayile kwaye emva koko Gcina ukugcina lonke utshintsho. Vala i-Notepad kwaye uqalise iFallout 3.
Ukuba umdlalo awukasebenzi ngendlela onqwenela ngayo, vula i-falloutprefs.ini kwi-notepad kwakhona kwaye utshintshe iNumHWThreads=2 ukuya kwiNumHWThreads=1.
Fikelela ngokukhawuleza kwiFolda yeScreenshot yeSteam Windows 10
Sayina ngokweKhompyutha amaxwebhu ePDF Ngaphandle kokuPrinta nokuskena
Ndiyathemba ukuba esi sikhokelo singentla sibe luncedo kwaye ukwazile sebenzisa iFallout 3 kwiWindows 10 ngayo nayiphi na imiba. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nesi sifundo zive ukhululekile ukubabuza kwicandelo lezimvo.